फिचर Archives • raradiodarpan.com
झन-झन खुल्दै नायिका एलिजा गाैतम, हेर्नुहोस् हट तस्बिरहरू
चर्चित पत्रकार ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरिन् । धमला दम्पती आफैले निर्माण गरेको उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजको चर्चा निकै चल्यो । कलिलो उमेरमा उनले आफूभन्दा १७ वर्ष जेठा व्यक्तिसँग लगनगाँठो कसिन् । त्यसपछि उनी रंगिन दुनियाँमा...
आँचल शर्मा नेपालकी निकै चर्चित नायिका हुन् । उनले छोटो समयमा नै निकै लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेकी छिन् । चलचित्र नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएकी आँचलले छोटो समयमा नै धेरै चलचित्र काम गरिसकेकी छिन् । तिनै चर्चित नायिका आँचल शर्माको...
पातली पातली चट्ट मिलेको जिउडाल, स्वस्तिमा खड्काको ग्ल्यामरस अवतार (तस्बिरहरू)
नायिका स्वस्तिमा खड्का पछिल्लो समय निकै ब्यस्त छिन् । म्युजिक भिडियो होस् । चलचित्रमा उनको ब्यस्तता कायमै छ । बिबाहपछि झनै ब्यस्त र रुचाईएकी नायिका पनि बनेकी छिन् स्वस्तिमा । उनको फ्यान फलोअर्स पनि निकै धेरै रहेका छन् । जसले उनलाई सफलताको नयाँ उचाई...
टिकटकमा चर्चित धराने सुन्दरी सानया लिम्बुको फिगर ! (फोटोफिचर)
सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरै युवायुवतीका लागि अपरिहार्य साधन भएको छ । समय विताउन सामाजिक सञ्जाल एउटा सजिलो माध्यम भएको छ । धरानकी एक सुन्दर युवती । सामाजिक सञ्जालमा उनको फिगरको निकै चर्चा छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय छन् । सामाजिक सञ्जालले...
जान्ह्वी कपुरले छोटो पहिरनमा दिइन् हट पोज ! हेराैँ तस्बिरहरू
जान्हवी कपूर बलिउडको स्टाइलिश र प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्री हुन्। जान्हवी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरी हुन्। करण जोहरको ५० औं जन्म दिन पार्टीमा धेरै बलिउड स्टारहरु सामेल भएका थिए। उक्त पार्टीमा जान्हवी कपूर ग्लैमरस स्टाइलमा पुगेकी थिइन् । जान्हवी कपूरले पार्टीका लागि निकै आकर्षक पोशाक...
पत्रकार उत्सवसँग क्लबमा रोमान्टिक पुजा ! हेराैँ तस्बिरहरू
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका पूजा शर्मा २९ बर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । उनको वि.सं २०४९ साल वैशाखको १७ गते सिन्धुपाल्चोकमा पूजाको जन्म भएको हो । पूजाले आफ्नो करिअरको सुरुवात चलचित्र ‘थ्रि लभर्स’बाट सुरु गरेकी हुन् तर फिल्म ‘प्रेमगीत’बाट भने उनको करिअर...
नियाको हट एण्ड बोल्ड लुक्स् (तस्वीर)
एजेन्सी । भारतीय अभिनेत्री निया शर्मा सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । उनी फ्यानका साथ नयाँ तस्बिर तथा भिडियो शेयर समेत गरिरहन्छिन् । हालसालै उनले ब्रालेस फाेटाेसुट गरेकि थिइन् । क्रप ज्याकेट, रिब्ड जिन्समा निकै बोल्ड देखिएकि थिइन् उनी । धेरैले उनकाे पहिरनकाे आलोचना...
युवाहरू फिदा बनाउने निक्कीको ‘सेक्सी’ लुक्स, हेराैँ तस्बिरहरू
बिग बस- १४ की निक्की तंबोलीको बोल्ड र आकर्षक तस्वीरले अहिले बलिउडमा चर्चा कमाएको छ । निक्की चाडैनै ‘खतरो के खिलाडी ११’ फिल्ममा काम गर्ने भएकी छिन् । फिल्मकै लागि उनी केपटाउन पुगेकी छिन् । जहाँबाट उनले तस्वीर शेयर गर्दै आएकी छिन् । भर्खरै...
नायिका साैन्दर्या शर्माको हट फोटोशुटले तहल्का, हेराैँ १४ तस्बिर
बलिउड अभिनेत्री सौन्दर्या शर्मा लकडाउनका कारण अमेरिकामा अ’ल्झिइन् । लकडाउनमा कोठामा थुनिएर त्यसै बस्नुभन्दा उनले आफू बस्ने अपार्टमेन्ट वरपरका बटुवालाई सहयोग गर्ने मनसुवा बनाइन् । सौन्दर्या भन्छिन्, ‘लस एन्जलसमा म बसेको घर छेउछाउमा भोकले रन्थनिएका व्यक्ति देखिए । उनीहरू खानाका लागि प्रायः कम्युनिटी सेन्टर...
गरिमा पन्त पनि बेबी बम्पमा रमाउँदै (तस्विरहरु)
नेपाली सिने जगतमा यतिबेला नायिकाहरु आमा बन्ने लहर नै चलेको छ । नायिका प्रीयंका कार्की, ऋचा शर्मा, गरिमा पन्त र कलाकार रक्षा श्रेष्ठ यतिबेला आमाको अनुभुती गरिरहेकी छन् । यी सबैको विवाह भएको खासै धेरै वर्ष बितेको छैन । कोरोना महामारीले जारी लकडाउन संगै...